I-Nevyansk ingenye yemizi ethandekayo kakhulu e-Urals Ephakathi. Yayisungulwa nguPetru I ngo-1701, usuku lokuqala eRussia lokuqubuka kwensimbi. Uphawu lomuzi wasendulo luyisakhiwo samaDemidovs, futhi esitektri sawo sokuqala kukhona umbhoshongo onogwadule. Manje isikwele lapho sitholakala kuthiwa ip. Revolution.
Lapho kwakhiwe umbhoshongo ongenamathele we-Nevyanskaya, akwaziwa. Angazi izazi-mlando futhi ngubani owaklama. Isikhathi esilinganisiwe sokumiswa yisiqalo sekhulu le-18. Imithombo ehlukahlukene ibeka ukubekwa kweNew Nevyansk Tower esikhathini esukela ku-1721 kuya ku-1745. Yakhiwa nguDemidov Akinfiy.
Abakhi bezakhi zanamuhla, lesi sakhiwo esithakazelisayo asihlukaniswa njengokuwa, okungukuthi njenge-oblique. Umbhoshongo nabendawo, kanye neziqondiso, zibize. Kungani eguqa, akekho owaziyo. Kunenganekwane, ngokusho ukuthi, izinguquko ezifanayo ekwakhiweni kwesakhiwo senzeke ngephutha likaDemidov ngokwakhe. Ngaphandle kwesakhiwo esingaphansi kombhoshongo kwakukhona isitolo, futhi kwakukhona imishini. Umsebenzi wenziwa ngokuphulwa okukhulu. Lapho ezwa ukuthi kufika umhloli ozayo, uDemidov wayala ukuthi indawo encane ibe yizikhukhula kanye nezindwangu. Ngenxa yalokho, kwakukhona umbhoshongo ohlaselayo.
Kodwa-ke, izakhiwo zanamuhla eziye zahlola lesi sakhiwo ziphikisa ngokuphelele le nguqulo. Ngokuklanywa lokho kucacile ukuthi umthamo wayo ungumphumela womqondo womakhi, noma iphutha ekwakhiweni. Iqiniso liwukuthi umlinganiso wokuqala wombhoshongo uphambukiswa kakhulu kwi-axis eqondile - cishe amamitha amabili. Izitezi ezingenhla zinezintambo ezincane. Ngakho-ke, singaphetha ngokuthi abakhi bamane bazama ukukhokhela iphutha labo okwenziwa esiteji sokubeka isisekelo namadonga.
I-Nevyanskaya incline tower - ukwakhiwa kakhulu (57.5 m). Ubude nobubanzi be-tier yokuqala ngu-9.5 m. Umbhoshongo uphakanyiswa esakhiweni sezitezi ezimbili. I-tier ephansi yi-quadrilateral efanele. Amathathu aphezulu angama-octahedron ane-windows amakhulu. I-tier ngayinye esilandelayo yindawo encane kunendawo edlule. Uphahleni lombhoshongo luyi-pyramidal, futhi i-octagonal. Ugcizelele ukwakhiwa kwensimbi yensimbi, ehlotshiswe ngesimo sezulu ngesimo sefulegi ngejazi lomndeni uDiidov.
Ngaphakathi kombhoshongo ongenamathele eNevyanskaya uhlukaniswe ngezithuba eziyisishiyagalolunye. Ukuqokwa kwamanye awo akukaziwa. Izazi-mlando ziyazi kuphela ukuthi okwesibili kwakuyihhovisi likaDemidov elizimele. Ezikhathini zaseSoviet, kwakukhona ijele lapha. Esitezi sesithathu se-Nevyan Tower kukhona igumbi lazo izindonga zalo zicolile nge-soot, futhi igolide nesiliva zitholakala emagumbini. Ngokomlando, uma i-Demidovs ishicilela izinhlamvu zemali ezikhohlisayo lapha. Kodwa-ke, izazi-mlando ziyakungabaza lokhu. Ukuzivocavoca, ngokombono wabo, babecebile ngokwanele ukuba babe engozini futhi bahlanganyele emisebenzini engekho emthethweni.
Okuthakazelisayo kakhulu futhi elinye igumbi lombhoshongo onophahla oluhlelwe phansi, elincane. Uma ume kuleli kamelo ekhoneni, ubhekene naye, ungenza ukuhleka komuntu osesendlini ehlukile. Ngesikhathi esifanayo, akukho okuzwakalayo phakathi kwekamelo.
Umbhoshongo we-Nevyanskaya (isithombe ongabona kuleli khasi) - ukwakhiwa okuzifihla ngokwawo kanye nesinye isithandwa. Esimweni sayo, abavubukuli baye bathola umklamo ongaqondakali, okukhumbuza ukuhlala okuvamile. Cishe, ukuqhuma kwesakhiwo kwakungeyona into engaphezu kwenduku yombani. Nokho, ngokusho komlando osemthethweni, lokhu akukwazi neze. Induku yombani yasungulwa kuphela ekupheleni kwekhulu le-18.
Lokhu okunye okuthakazelisayo kweso sakhiwo. Ufake izikhumba eNewyan Tower yena uDemidov. Ngokwe-version eyodwa, wabayala eNgilandi. Kuyaziwa ngokuqinisekile ukuthi iwashi libiza kuye ngaphezu kwesamba esizungezile kulawo maxesha - ama-ruble angu-5000. Ukuqhathanisa: ukwakhiwa kombhoshongo ngokwawo kubiza imali engaphezu kuka-4000 ruble.
Isici se-Nevyansk chimes ukuthi bangakwazi ukudlala izingoma eziningana ezahlukene. Iwashi lishaya yonke imizuzu engu-15, 30 no-60, isikhathi ngasinye ngendlela entsha. I-niche ngaphansi kwemithwalo ye-chimes yenziwa phakathi nobude bombhoshongo. Iwashi okwamanje isebenza ngumphathi oqeqeshiwe, futhi babonisa isikhathi ngokuqondile.
I-Nevyanskaya umbhoshongo - hhayi enkulu kakhulu ekwakhiweni kwendawo. Futhi ngakho-ke wonke amagumbi angaphakathi kuwo aseduze kakhulu. Isebenza nakwezitebhisi. Ukuhamba ngezinyathelo zabo ezincane nezinyathelo akulula kakhulu. Ngaphezu kwalokho, isakhiwo sasendulo asizange sihlinzekele ukuthuka.
Izindonga zombhoshongo ezindaweni zidonsa ndawonye ngemigqa yensimbi ephuma futhi ihlanganiswe nezikhiye ezikhethekile. Kuzofakiwe, ama-gauge angama-mechanical ayanda kufakwa, elandela umthamo wesakhiwo sakhiwo. Ngendlela, akubanga khona ushintsho kuze kube manje. Ubukhulu bezindonga zombhoshongo buyi-2 m ngezansi futhi okungaphezulu kuka-30 cm phezulu.
Namhlanje lesi sakhiwo yisikhumbuzo somlando. Into yokuqala ukuthi izivakashi zomuzi zizozibona umbhoshongo ongenamkhawulo we-Nevyanskaya. Izikhathi lapha zigcinwe njalo futhi ziqala nge-periodicity yemizuzu engu-15 (amahora angu-1.5). Naphezu kokuba abantu abaningi kangaka beza ukubona lesi simangaliso se-Urals, lolu hlelo lwakhiwa kakhulu futhi lunentshisekelo. Ukuvakashela enye yezokuvakasha, uzothola yonke imininingwane ngendlovu yokuqhaqhazela ngezizathu zomthamo wombhoshongo, ubuhlungu bukaDemidov, okusolakala ukuthi bulele ezindongeni zefa lakhe labasebenzi ababalekile, ungakwazi ukuphrinta uhlamvu lwemali lokugubha, njll.
Inqaba egcinwe i-Nevyanskaya egcinwe (naphezu kokuthi ezikhathini zaseSoviet eziphathwe ngayo akukona ngokucophelela) kuhle kakhulu. Akekho owayezoqhuma noma ahlakaze noma yiziphi izakhi zalo ezakhayo. Emva kwakho konke, lokhu kungokwakhiwa kwenhloso yomphakathi, hhayi inkolo.
Emaphethelweni aseduze kombhoshongo kukhona amathafa asefektri endala kanye neTransfiguration Cathedral. Lezi zinsuku nazo zigcinwe kahle kakhulu. Eminyakeni yeSoviet, yahlala esitolo ukuze kwenziwe amabhomu embonini yokuvikela. I-cathedral yasungulwa ngemuva kokudayiswa kwesitshalo yiDemidovs (izizathu zalokhu zingatholakala futhi ngokuvakashela ukuvakasha). Lokhu kwenza abanikazi abasha - i-Yakovlevs. Ngokomlando, abalimi abacebile babefuna ukwakha isakhiwo esasimude njengombhoshongo. Kodwa-ke, lapho kwenziwa ukwakhiwa ukuthi lokhu akunakwenzeka.
Intaba encane ye-Nevyanskaya: indlela yokufinyelela ngayo
Ukuze uvakashele leli dolobha lasendulo, udinga ukuhamba ukusuka e-Ekaterinburg ukuya eNizhny Tagil ngasendleleni yeSerov. Ngeke kudingeke sihambe isikhathi eside kakhulu. Ibanga elisuka esikhungweni sesifunda kuya eNevvyk lingama-60-70 km kuphela. Uma ungena edolobheni udinga ukuthuthela egcekeni eliphakathi. I-Nevyansk yokuhlala ayikho enkulu kakhulu, ngakho-ke akunakwenzeka ukuba ilahlekelwe kuyo.
Ngaphandle kombhoshongo kanye nesikhishobhi, indawo iyaziwa futhi nezinye izinto ezikhangayo. Isibonelo, i-7 km ukusuka eNevyansk kunedolobhana elibizwa ngeBungi - indawo yokuThula yamaKatolika endala neSt. Nicholas Church, elinye lamatshe okuqala elakhiwe e-Urals. Emzaneni waseNizhniye Tavolgi kunomhlangano omdala wezitsha zobumba.
Ungangena edolobheni futhi ngesitimela uye eNizhny Tagil. Ithikithi kuzodinga ukuthathwa esiteshini "Nevyansk". Iya kuleli dolobha namabhasi ngamabhasi (kusukela esiteshini "seNyakatho" sebhasi).
Isikhathi esingakanani ukuvakashelwa kwamehlo enjengoba umbhoshongo onguNewvykaya owenziwe? Amahora okuvula emnyuziyamu: kusuka ngo-9 ekuseni ukuya ku-6: 00 ebusuku (ehlobo - kuze ku-7 ntambama). Izindleko zokuvakasha yi-rubles -1500-2800 (kuye ngokuthi inani labantu eqembu). Izithombe kufanele ukhokhe ama-ruble angu-100. (I-piece 1). Ukunyathelisa ngokuzimele kwemali kuyadingeka ukuba usebenzise ama-ruble angu-200-300.
Kuzovakashelwa kulokhu okukhangayo, ngakho-ke akubizi kakhulu. Ukwaziswa kulolu cala lungatholakala ngaphezu kokwanele. Umbhoshongo we-Nevyanskaya incline (ikheli: Ploschad Revolyutsii, 2) isakhiwo esiyimfihlakalo nesingavamile.
Kuphi okuhle ukuphumula eCrimea? Okukhethwa kukho konke ukunambitheka!
Incazelo ye-phraseology "umgqomo udalwe", umsuka nezibonelo
Indlela balahle uthando: iseluleko ngokwengqondo. Yelaphani Ngothando